qaabka galmada guska weyn iyo siilka yar - iftineducation.com
qaabka galmada guska weyn iyo siilka yar
aadan21 / June 14, 2016
iftineducation.com – Dumarka meel walba ay jogaan waxaa jira wax badan oo ay iskga mid yihiin marka la joogo ciyaarta sarirta ama kulanka gogosha waayo dumarka waxaa yihiin kuwa hal mara wax arka markaas wixii ay arkaan ayeey oga dhagtaa sida dhabta ah.
Dumarka jacela ninka dakarkiisu uu weyn yahay taas waa arin kaa yaabi doonta wayao ma aamini doontid markii aad maqasho taas badalkeeda waxaa ay dumarku jeclyihiin raga dakarka yar marka la eego ilaa 2 sabab.
In aad leedahay dakar wayn micno sidaas u buuran soo kordhin meyso lkn waxaa micno soo kordhina in aad leedahay xirfad aad ugu raaxeyn karto qofta aad la bashaale.
Raaxada dumarka ma jrito qeybta hoose ee xubinta taranka dumarka lkn waxa la ogaaday in ay ku jirto raaxada dumarka afka hore ee xubinta taranka Dumarka.
1- Hablaha ninka dakar yare waxaa ay ka helaan raaxo macaan waayo dareenka dumarka waxaa uu ku jiraa afka hore ee siilka marka sidaas darteed ninkaa guska gaaban waxaan uu maanta dhan ku celcelinaa afka hore waxaan afka hore ku jira dareen macaan.
2- Ninka dakarka gaaban dumarka dhib weyn kuma ahan halka ninka dakar weyn uu dhib ku yahay dumar waayo xanuun iyo dhib ayeey ka qadeen dakar weyn lkn waxaa jira dumar jecel nimanka dakar weyn lkn dumarkas ma badna waxaan la shegaa in ay yihiin dumarkaa kuwa buuran ee wali saa.idka ah.
qaabka siigada ukala baxdo
Nin Soomaali ah oo afduub u qabsadey dad ka dukaameysanayey Walmart, gobolka Taxes ee dalka Maraykanka